सभामुखले लिए शपथ- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
सभामुखले लिए शपथ
फाल्गुन १, २०७४ प्रकाश अधिकारी
सुर्खेत — प्रदेशसभाले सांसद राजबहादुर शाहीलाई निर्विरोध सभामुखमा निर्वाचित घोषणा गरेको छ । ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीले सदस्य शाहीलाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव पढेर सुनाए । एमाले सांसद प्रकाश ज्वालाको उक्त प्रस्तावलाई माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले समर्थन गरेका थिए ।
प्रस्तावक र समर्थकको सम्बोधनपछि ज्येष्ठ सदस्यले एक जनाको मात्र प्रस्ताव दर्ता भएकाले सभामुख पदमा राजबहादुर शाही निर्विरोध निवार्चित भएको घोषणा गरे । अर्को बैठक फागुन ५ गते बस्नेछ । उक्त बैठकमा उपसभामुख निर्वाचन हुनेछ । निर्विरोध निर्वाचित सभामुखले प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालबाट सोमबारै शपथ लिए । पथ लिएलगत्तै प्रदेशसभा सचिवालयस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा पद बहाली भयो । प्रदेशमा झन्डावाला गाडी प्रयोग सभामुख नै प्रदेश सरकारको पहिलो भीभीआईपी बनेका छन् । मुख्यमन्त्री चयन हुन बाँकी छ ।
दैलेख २ (ख) बाट निर्वाचित सांसद शाही ठाटीकाँध गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन् । ०३९ सालमा नेमकिपाको विद्यार्थी संगठनबाट उनको राजनीतिक जीवन सुरुआत भएको थियो । ०५२ सालमा तत्कालीन नेपाल मजदुर किसान पार्टी एमालेमा समाहित भएसँगै उनी पनि एमालेमा लागेका थिए । ०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा उनी तत्कालिन तोलीजैसी गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सर्वस्वहरण भएपछी उनी काठमाडौंमा विस्थापित भएका थिए । ४८ वर्षीय सालीन स्वभावका उनी एमालेमा बौद्धिक नेतामा पर्छन् । जिल्ला कमिटी सदस्य र तत्कालीन भेरी अञ्चल समन्वय कमिटीको सदस्य भई काम गरिसकेका छन् । सभामुखमा निर्वाचित भएलगत्तै उनले आफ्नो सामु आएको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘थुपै्र कानुन निर्माण गर्ने, नियमित सभा सञ्चालन गर्नेदेखि प्रदेशको विकासका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छु’ शाहीले भने, ‘प्रदेशसभा सानो भए पनि चुनौती धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा सभामुखको सक्रियता र दक्षताको खाँचो धेरै पर्छ । त्यो मबाट कुनै कमी हुँदैन ।’
प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ११:११
सडक र पुल निर्माणमा लापरबाही
खोलामा भरपर्दो डाइभर्सन नहुँदा जोखिमपूर्ण
कामभन्दा बढी रकम माग्दा रोल्पामा भुक्तानी रोकियो
जनप्रतिनिधिकै रोहवरमा बनेको सडकमा विवाद
फाल्गुन १, २०७४ दुर्गालाल केसी
दाङ/रोल्पा — दाङको लमही–घोराही–तुलसीपुर खण्डका विभिन्न खोलामा बन्दै गरेका पुल ढिलाइले यात्रा झन्झन् कष्टकर भएको छ । तिनमा भरपर्दो ‘डाइभर्सन’ नहुँदा यातायात सञ्चालनमा समस्या उत्तिकै छ । खाल्डाखुल्डी र चिप्लो बाटो भएकाले गाडी चिप्लने र फस्ने समस्याले दैनिक जाम हुन्छ ।
पुल निर्माणका क्रममा कालोपत्रे सडक भत्काएका कारण खोला छेउछाउको सडक धूलाम्मे छन् । दैनिक यात्रा गर्नेलाई धूलोले सास्ती दिएको छ । खोला आसपासका बासिन्दा पनि धूलोबाट आक्रान्त छन् । भएको संरचना भत्काएको र नयाँ बनिनसकेकाले सडकमा दिनहुँ धूलाम्मे छ । ठाउँ–ठाउँका खाल्डाखुल्डी र धूलोले यात्रा कष्टकर भएको छ ।
सडक र पुल निर्माणमा तदारुकता देखाउन माग गर्दै नागरिक समाज र व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन, सडक डिभिजन र उपमहानगरपालिकामा पटकपटक अनुरोध गर्दै आएका छन् । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले निर्माण कम्पनी र सडक डिभिजनलाई काममा लापरबाही नगर्न सचेत गराउँदै आएका छन् । कटुवा खोला पुल र सडक निर्माणमा लापरबाही गरेको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ठेकेदार पदम शर्मालाई कालो छ्यापेर सांकेतिक कारबाहीसमेत गरेको थियो ।
नागरिक समाजले सडक डिभिजनमा धर्ना दियो । अनेक उपाय गर्दा पनि काम नहुँदा नागरिक समाज दु:खी छ । ‘हामीले सबै निकायमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं । जनतालाई सास्ती दिने काम भएको छ । वर्षौं बित्दा पनि पुल निर्माण हुन सकेन,’ समाजका संयोजक टीकाराम रेग्मीले भने, ‘सडक यात्रा गर्न योग्य छैन र पनि सम्बन्धित निकाय सुनुवाइ गर्दैन ।’
वर्षाभरि कतिबेला कुन खोलामा बाढी आएर यातायात अवरुद्ध हुन्छ थाहै हुँदैन । अहिले पनि समयमा पुल निर्माण नभए वर्षातमा आवतजावत गर्नै सकिँदैन । कहिले बाढीले यातायात अवरुद्ध हुन्छ त कहिले गाडी नै बगाउँछ । पुल निर्माणका क्रममा कज–वे भत्काएपछि सहजै गाडी पार हुन्न । लमही–तुलसीपुर यात्रा गर्न १० वटा खोला पार गर्नुपर्छ । तीन किलोमिटर फरकका खोलाले यात्रा निकै जोखिमपूर्ण गरेको छ । लमही तुलसीपुर खण्डको चौपट्टादेखि तुलसीपुरसम्म बबई, सिस्ने, कटुवा, सेवार, गुज्रे, हापुर, पत्रे, संक्राम, ग्वार र काला खोला छन् ।
वर्षात्मा खोलाले बगाएर मानिसको ज्यानै जाने गरेको छ । तीन वर्षअघि ग्वार र काला खोलाले बगाउँदा तीन जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यीमध्ये ५ खोलामा पुलको काम सुरु भए पनि गती सुस्त छ । बबई, कटुवा, गुज्रे, पत्रे र संक्राममा पुल बनाउन थालेको लामो समय बित्यो तर ठेकेदार र सडक डिभिजनको लापरबाहीले काम अघि बढेको छैन । अहिले पनि समयमै काम नभए वर्षातमा आवतजावतै कष्टकर हुने छ ।
अन्य खोलामा केही काम भए पनि कटुवा र पत्रे खोलामा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । यी खोलाका पुलमा सबैभन्दा बढी लापरबाही भएको छ । यहाँ सबैभन्दा पहिले निर्माण थालिएको हो । पछि काम सुरु गरेका संक्राम, गुर्जे र बबईमा काम धेरै अघि बढदा पनि यहाँ कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । यी खोलामा पुल निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको शंकर माली कन्स्ट्रक्सनले काममा लापरबाही गरिरहेको छ । शंकर मालीका प्रतिनिधि पदम शर्मा काममा गैरजिम्मेवार भएको भन्दै सबैतिरबाट आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ । यही आक्रोशबीच चन्द नेतृत्व नेकपाले उनलाई कालो छ्यापेर सांकेतिक कारबाही गरेको
बबई र गुज्रे खोलाको ठेक्का अनक वज्रगुरु निर्माण सेवा र संक्राम खोलाको रौताहा कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । शंकरमालीभन्दा यी कम्पनीले केही प्रगति गरेका छन् । एउटै व्यवसायीले धेरै योजना लिने र समयमा काम नगर्ने समस्या बढदै गएको छ । शंकर मालीले कटुवा खोलाको पुल निर्माणमा लापरबाही गरिरहेका बेला पत्रे खोलाको पुल र घोराहीको चार लेन सडकको पनि जिम्मा दिइएको छ ।
मुख्य निर्माण कम्पनी फिल्डमा नखट्ने र प्रतिनिधिका रूपमा झोलेलाई खटाउने प्रवृत्तिले समयमा काम नभएको छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिप्रति सडक डिभिजन कार्यालय मुकदर्शक बनेको छ । नागरिकको तीव्र विरोध बाबजुद सडक डिभिजनले शंकरमाली कन्स्ट्रक्सनलाई केही कारबाही गरेको छैन । उल्टै ठूल्ठूला योजनाको ठेक्का दिइरहेको छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय डिभिजन सडक घोराहीका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्माले खोलामा सहज डाइभर्सन बनाएर मात्रै काम गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको बताउँछन् । ठेकेदारले विभिन्न बहानामा काममा ढिलाइ गरे पनि कार्यालयले निरन्तर ताकेता गरिरहेको उनले बताए । ‘काम समयमै गर्न हामीले निर्देशन गरिरहेका छौं । सडक र खोलामा खाल्डाखुल्डी पुर्न पनि भनेका छौं,’ उनले भने, ‘सडक बिग्रिरहने भएकाले समस्याभएको हो ।’
समयमा काम नगर्नु, कार्यतालिका अनुसार प्रगति नहुनु र पटक–पटक मौखिक तथा लिखित पत्र लेख्दा पनि काम सम्पन्न गर्नेतर्फ अग्रसरता नदेखिनुको कारण मागी सडक डिभिजनले ठेकेदारलाई पत्र लेख्ने र सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरेको छ । कार्यालयले काम नहुनाको कारण सात दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने अन्यथा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने, निर्माण गराउँदा लाग्ने बढी खर्च व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने र समयमा रकम भुक्तानी नगरे सम्पत्ति रोक्का गरी असुल गर्ने चेतावनी दिँदासमेत ठेकेदारले बेवास्ता गरेका छन् ।
बजेट छानबिन माग
जनप्रतिनिधिको निगरानीमा उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न सडक योजनामा अपारदर्शिता देखिएको भन्दै विपक्षीले छानबिन गर्न माग गरेका छन् । पश्चिमी रोल्पाको माडी गाउँपालिकास्थित एउटा सडक योजनाको कामप्रति स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको हो । माडी गाउँपालिका घर्तीगाउँको पेदीखोलादेखि झिनुवासम्मको ग्रामीण सडकमा छुट्याइएको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी पारदर्शी नभएको आरोप छ ।
जनप्रतिनिधिले पारदर्शिता नचाहेकाले छानबिन नगरेको आरोपमा नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत विरोध गरेका हुन् । गाउँपालिकालाई छानबिन गरेर मात्र भुक्तानी दिन दबाब दिइएको छ । गाउँपालिकाले पारदर्शिताबिनै सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्न लागेकामा विपक्षीले विरोध जनाएका हुन् । पालिकाले विवादपछि थप भुक्तानी रोकेको छ । करिब १ किमि सडक खन्न ५५ लाख छुट्याइएकोमा विवादपछि २५ लाख मात्र भुक्तानी गरिएको छ । स्थानीय तहमा सुनुवाइ नभएमा छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा समेत उजुरी दिने विपक्षीले चेतावनी दिएका छन् । घर्तीगाउँ गाविस पूर्वअध्यक्ष गोपाल घर्ती संयोजकत्वमा स्थानीय छलफल समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रेम घर्ती, सूर्य खड्का, पहलमान वलीलगायत छन् ।
पालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुनले विवाद देखिएपछि भुक्तानी रोकिएको बताए । ‘उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन बजेट विनियोजन गरिएको थियो । डोजरमार्फत काम गरेका रहेछन् । कम बजेट मात्रै खर्च भएको भन्ने विवाद भएपछि भुक्तानी रोकिएको हो,’ पुनले भने । उनका अनुसार जिसस तथा अन्य माथिल्लो तहबाट प्राविधिक खटाएर पुन: अनुगमन गरेपछि मात्रै भुक्तानी दिइनेछ । उक्त सडक खन्न वडाबाट ४० र गाउँपालिकाबाट १५ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरिए पनि ठेक्कामार्फत खन्ने काममा डोजर प्रयोग गरिएपछि स्थानीय असन्तुष्ट भएका हुन् । सबै काम डोजरबाट गरिएको र बढी काम गरिएको भन्ने दाबी गरेपछि स्थानीयको दबाबमा विरोध सुरु भएको हो । स्थानीय कृष्ण वलीका अनुसार डोजरमार्फत काम गर्दा धेरै समय खर्च भएको झूठो प्रमाण दाबी गरेर बजेट लैजाने मनसायको स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । ‘धेरैपटक सचेत गराउँदा पनि वास्ता गरिएन । वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि यसको जानकारी गराउँदा वास्ता भएन ।’ वली भन्छन्, ‘हामीले पारदर्शिताबारे जानकारी माग्दा जितेकाले बाहेक अरूले जान्न पाउँदैन भनियो ।’ उनले उपभोक्ता समितिले अपारदर्शी काम गरेको भन्दै १ सय ५० जनाको हस्ताक्षरयुक्त निवेदन पालिका अध्यक्षलाई बुझाए पनि वास्ता गरिएन । स्थानीयको पहलमा गठन गठिन छानबिन समिति अध्यक्ष गोपाल घर्तीका अनुसार सडक निर्माण गर्न त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट डोजर ल्याउँदादेखि काम सक्दासम्मको सबै समय ४ सय ४ घण्टा मात्र खर्च भएको छ । डोजर ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले ६ सयभन्दा बढी घण्टा समय खर्च भएको दाबी गरेका छन् । घर्तीले समितिमार्फत जनप्रतिनिधिको रोहवरमा भएको काम प्रभावकारीसमेतनभएको बताए ।
प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ११:०७
बैंक गाउँमा, चेक बोकेर सदरमुकाम
वडा कार्यालयमा न्यून साधन स्रोत
जयबहादुर रोकाया, करिश्मा चौधरी
दृष्टिविहीन हजुरआमा स्याहार्दै नाबालक
कर्णालीमा स्वयंसेवी परिचालन गरिने
गढी पुन:स्थापना माग
पुर्खाको जुक्ति बिर्सियो नयाँ सुद्धी आएन
सम्पादकीय माघ २, २०७५
नेपाल भूखण्ड बनेकै भूकम्पको कारणले हो । भूकम्पको भय सधैँ छ । यसले हामीलाई सिकाइरहन्छ । हामीले केही सिकेका छौं । कति सिक्नै बाँकी छ । सिकाइ आजको भने होइन ।
अर्थतन्त्रको दिव्य उपदेश
सञ्जय आचार्य माघ २, २०७५
नेपालको विगत पचास वर्षको आर्थिक विकास प्रवृत्तिमा भरोसालाग्दा पक्षहरू कमै भेटिन्छन् । धेरै क्षेत्रमा निराशालाग्दा तस्बिरहरू छन् । नेपाल अल्पविकसित मुलुकको स्थितिबाट माथि जानसकेको छैन ।
म जन्मेको छाउगोठ
अर्जुन थापा माघ २, २०७५
आमाका अनुसार अढाई दशक पहिले मैले धरतीको महसुस गोठमा गरेको थिएँ, जुन बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीको थियो । त्यहीँ मेरो छैटी मनाइयो र मैले नाम पाएँ । गोठमा...
भूकम्पबाट कसरी जोगाउने स्कुल ?
नारायण मरासनी माघ २, २०७५
विगतमा गएका भूकम्पले विद्यालयमा पारेको असर र क्षतिले अन्तरनिहित जोखिमको डरलाग्दो स्थिति देखाउँछ । २०४५ भदौ ५ गते उदयपुर केन्द्रविन्दु पारेर गएको भूकम्प होस् वा २०७२...
मुखले नारीवाद, बगलीमा छुरा
उषा थपलिया माघ २, २०७५
धेरै नेता महिला अधिकारको चर्को दुहाइ दिन्छन् । तर आफ्नो परिवारमा महिलामाथि निजी सम्पत्तिझैं नियन्त्रण गर्छन् । उ द्योगी चण्डीराज ढकालकी दिवंगत आमाको तेह्रौं दिनको पुण्यतिथिमा प्रसाद ग्रहणका...
योग दिवसलाई श्राद्ध हैन, सार्थक बनाऊँ
प्रल्हाद प्रसाद दाहाल माघ १, २०७५
योग पूर्वीय दर्शन हो । यो पौराणिक विज्ञान हो । यो विधा भारतबर्षमा विकसित भएको हो । हाल यसको अस्तित्व विश्वभर फैलिँदो छ ।
प्रादेशिक लेखा समिति जवाफदेहिताको जग
सम्पादकीय माघ १, २०७५
प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयले खरिद गरेका सवारीसाधनमा आर्थिक अनियमितता आशंकापछि प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको छ । छानबिन सुरु भएपछि समितिका सभापति...
‘किपुमि’को भूमि बेदखल
राजेन्द्र महर्जन माघ १, २०७५
महाराज पृथ्वीनारायण शाहसँग जम्काभेट भयो, एक गणतान्त्रिक साँझमा अचानक कीर्तिपुर पाँगा दोबाटोमा मैले सोधेँ–बाजे महाराज ! तिमी फेरि कीर्तिपुरै आयौ ? उहिल्यै काटिगएका थियौ किपु–ज्यापुका नाक–कान के तिमी फेरि...
सडक सुरक्षा र संसद्
डिला संग्रौला माघ १, २०७५
अहिले स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रका विविध पक्षबारे बहस भइरहेको छ । सबै बहसको उद्देश्य नागरिकको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्ने बुझिन्छ । ती महत्त्वपूर्ण विषय हुन् । तर हरेक...
मोबाइल सेवा नवीकरणमा उल्झन
झलक थापा मगर माघ १, २०७५
मोबाइल सेवाको दोस्रो पटकको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरको विषयमा दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा प्रस्ट व्यवस्था छैन । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र २०७१ सालमा १८...